Firenena azo antoka kokoa ho an'ny mpitsidika Amerikana izao i Bahamas
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Firenena azo antoka kokoa ho an'ny mpitsidika Amerikana izao i Bahamas
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Fandefasana gazety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • WTN
Sary avy amin'ny The Bahamas Ministry of Tourism & Aviation
Namoaka fanambarana ofisialy ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas tamin'ny alahady ho valin'ny toro-hevitra momba ny Travel CDC nohavaozina nataon'i Etazonia.
Ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas dia nanamarika ny toro-hevitra momba ny fitsangatsanganana navoakan'ny Foibe amerikana momba ny fanaraha-maso ny aretina ary ny fisorohana (CDC) mampihena ny tolo-kevitry ny diany ho an'ny Bahamas avy amin'ny ambaratonga 4 mankany amin'ny toerana 3.
Ny CDC dia manombana ny risika ambany kokoa noho ny fihenan'ny isan'ny tranga COVID-19 ary koa ny lalan'ny tranga ambany kokoa. Ny tahan'ny fandrakofana sy ny fahombiazan'ny vaksiny dia mitana anjara toerana amin'ny famaritana ny haavon'ny toro-hevitra ataon'ny CDC.
Manoro hevitra ny minisiteran'ny Fizahantany, ny fampiasam-bola ary ny fiaramanidina fa, isika vahoaka, dia tsy afaka miala amin'ny fiambenanay - miasa ny rafitra napetraka.
Ny Minisiteran'ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Sidina Bahamas momba ny toro-hevitra momba ny Travel CDC navaozina:
Tena ilaina ny fiambenana satria mbola hitohy hatrany ny fitandremana mba hiantohana ny fiarovana ny mponina sy ny mpitsidika.
Fanavaozana vao haingana sy fepetra takiana amin'ny fidirana toy ny fiantohana ny mpandeha vita vaksiny tanteraka na tsy vita vaksiny dia mahazo fitsapana COVID-19 ratsy (na Fitsapana Antigène Rapid na Fitsapana PCR), nalaina tsy mihoatra ny dimy (5) andro talohan'ny daty nahatongavana tany Bahamas. - miaraka amin'ny fameperana ao amin'ny nosy raha ilaina - dia hita fa nahomby tamin'ny fanalefahana ny fihanaky ny viriosy.
“Ny fizahan-tany no ain'ny toekarentsika, ary mifantoka amin'ny fiantohana ny fiarovana ny mpitsidika sy ny mponina eto amintsika ny protocole”, hoy ny praiminisitra lefitra I. Chester Cooper, Minisitry ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas. “Ity toro-hevitra nampidina ity dia porofo fa miasa ny zavatra ataontsika – saingy tsy midika izany fa afaka miala amin'izao fiodinana manakiana izao isika. Tsy isalasalako fa raha manohy miara-miasa isika rehetra dia hahita fitomboana goavana manerana ny sehatry ny fizahantany. ”
Noho ny fiparitahan'ny COVID-19, ny Governemanta Bahamas dia hanohy hanara-maso ireo nosy tsirairay ary hanao fepetra fiarovana mba hamahana tranga manokana na spike mifanaraka amin'izany. Raha hijery ny fomba fitetezana sy fidirana ao Bahamas, tsidiho azafady Bahamas.com/travelupdates.
Manohy manentana ny rehetra izahay mba hanao ny anjarany amin'ny fampihenana ny fihanaky ny aretina: manao saron-tava, manasa tanana, manao vaksiny ary manaja ny fanalavirana ara-batana sy ny fitsipiky ny fahadiovana izay manampy amin'ny fiarovana anao sy ny Bahamiana mpiara-miasa aminao.
Fanazavana fanampiny momba ny zava-mitranga any Bahamas amin'ny Novambra.